Famoahana vita amin'ny gorodona an-tsokosoko ivelany, Famandrihana fantsom-bolo ivelany ivelany, Fampisehoana Led Hud Oudoor, Mpamatsy fisehoan-jiro Oudoor Led China in China
Shenzhen Priva Tech Co., Ltd. [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Mark: Worldwide mpanondrana:71% - 80% Certs:ISO14001, CE, EMC, RoHS, UL Description:Famoahana vita amin'ny gorodona ivelany,Fanamarihana Led Led Custom Custom,Oudoor Hd Led Display,Ondoor Led Window Show,,
Home > Products > Led Kiosk Poster > Famoahana vita amin&#39;ny gorodona ivelany
Famoahana vita amin'ny gorodona ivelany
Ny vokatra avy amin'ny Famoahana vita amin'ny gorodona ivelany , mpanofana manokana avy any Shina, Famoahana vita amin'ny gorodona ivelany , Fanamarihana Led Led Custom Custom mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny Oudoor Hd Led Display R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
Ahoana no mahasarika ny sain'ny mpihaino ny afisy mitarika P5 Outdoor na fampisehoana ivelany notarihina ivelany ? Miaraka amin'ny mampiavaka azy amin'ny serivisy , Priva Kiosk Screen Outdoor Led dia mora ny mahita fiantraikany lehibe any
Fa maninona no misy ny takelaka efijery ivelany na Double Sided Outdoor Led Poster izay tena malaza amin'izao fotoana izao. Mampitaha amin'ny milina LCD, ny fampisehoana Led dia manana tombony toy ny fahatokisana avo kokoa, fanamainana sary tsara; Zoro fijerena mivelatra; Haavo ambonimbony avo kokoa: vahaolana...
Shina Famoahana vita amin'ny gorodona ivelany mpamatsy
Ny takelaka efijery LED ivelany dia lasa safidy tsara indrindra amin'ny dokambarotra sy milina fitadiavana vola tsara indrindra
Ity karazana afisy mitarika ivelany ity antsoina koa hoe mpilalao AD nitarika dia iray amin'ireo fampiharana vaovao ho an'ny fampirantiana notarihina. Namboarina avy amin'ny efijery nitarika, mety tsara kokoa sy mora ampiasaina izy io. Tsy mila mametraka satria mitsangana gorodona. ary azo apetraka na aiza na aiza ilana ny tontolo anatiny na ivelany.
Tsy voatery Pixel hitoby 4mm, 5 mm, 6mm.optional habeny 60 ` '. IP65 / 54, porofo amin'ny toetr'andro; Ultra Ny HD ivelany dia nitarika sary afisy , sary kristaly mazava ary mazava; Famirapiratra sy fanitsiana auto araka ny tontolo iainana; Ny fitantanana vondrona manan-tsaina, mora sy malefaka. Misaotra ny rafi-pitantanana Cluster sy ny teknolojia GPS, na inona na inona firy misy ny paositra anananao izay misy azy ireo dia afaka mifehy azy ireo mora ianao ary manova haingana ny atiny.
Ondoor Led Window Show
Fampisehoana fisehoana ho an'ny dokam-barotra ivelany